Ciidamada Dawlada Oo Holgal Aysameen Maanta Kusoo Qbtay Wax yaalaha Qarxa – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dawlada Oo Holgal Aysameen Maanta Kusoo Qbtay Wax yaalaha Qarxa
Ciidamada Booliska Somaliya oo hawlgal ka sameeyay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay ku soo qabteen guri lagu diyaarinaayay walxaha qarxa, si weeraro looga gaysto Magaalada Muqdisho.
Gurigan oo ku yaala Degmada Yaaqshiid, ayaa waxaa laga soo qabtay laba nin iyo haweeney, kuwaa oo lala xiriirinaayo suurta galnimada inay xiriir la lee yihiin Ururka Al Shabaab. Guriga waxaa laga helay qaraxyo iyo bistoolado la sheegay in dadka lagu dili jiray.
Taliye Ku Xigeenka Booliska Somaliya, General Mukhtaar Xuseen Afrax oo Saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay in hawlgalka oo xalay laga sameeyay Degmada Yaaqshiid ay ugu suurta gashay inay ku soo qabtaan saddexdaasi qof, qaraxyada iyo bistooladaha.
Taliye Ku Xigeenka, ayaa ku waramaaya inay in muddo ahba ku daba jooggeen gurigaasi, ugu dambeena ay ku guuleysteen inay ka soo dhex helayn qaraxyada.
General Afrax, ayaa sidoo kale sheegay laamaha ammaanka inay wadaan baaritaano ka dhan ah dadkii qaraxyada lagu soo qab qabtay, iyadoo uu muujiyay inay dadka ku dili jireen Magaalada Muqdisho.
Afrax waxa uu shacabka reer Muqdisho uu ku ammaanay wada shaqaynta ay la lee yihiin Xoogaga Booliska, isagoo Booliska iyo shacabka ku sheegay kuwo si wadajir ah u shaqeeya.
Guriga laga helay walxahan qarxa, ayaa ahaa mid ka sameysan jiingad oo ay lee yihiin dad shacab ah, balse tallaabada lagu soo qabtay, ayaa waxaa xogteedu bixiyay shacabka.
Wasiirka Gaashaandhiga oo ka Hadlay Hawlgalada Ciidamada Itoobiya ka Wadaan Dalka
Korneyl C/raxmaan Cabdi Dhimbil, Waan ka tashan doonaa Ciidamada Itoobiya ee aan Amisom ka tirsanayn
Guddiga doorashooyinka Koofurgalbeed ayaa soo saaray qoraal ay ku shaacinayana doorashada afar kursi oo uu ku jiro kursiga HOP103 ee uu guddiga doorashada Heer Federal hakiyay.
Qoraalka ka soo baxay guddiga heer dowlad goboleed ayaa u qornaa:
Qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka Heer Federal ayaa lagu hakiyay kursiga tirsigiisu kor ku xusan yahay 103 ee uu ku fadhiyay Maxamed Cismaan Jawaari, kadib cabasho ka timid habraaca loo maray.
Kursigan oo deegaan doorashadiisu yahay magaalada Baydhabo ayaa waxaa sideeddii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka lagu hakiyay kursiga 103.
Ku: Guddiga Doorashooyinka (SEIT) Koonfur Galbeed
Og: Guddiga Xalinta Khilaafaadka
Og: Madaxda Maamul Goboleedyada
Og: Raysalwasaaraha – JFS
Ujeedo: Hakin doorashada kursiga (HoP103)
Waxaa mahad iyo bogaadin u soo jeedinayaa guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo si hagar la’aan ah u wada hawsha doorashada, iyadoo maanta ay kuraastii doorashada golaha shacabka ee ugu horaysay ay ka dhacayso Baydhabo.
Haddaba iyadoo ay ka imanayso cabasho habraaca loo maray kursiga tirsigiisu kor ku xusan yahay, iyadoo guddigu (FEIT) saaka ka yeesheen shir ayaa ay isku raaceen in la hakiyo doorashada kursigaas, haddaba waxaan faraynaa guddoonka iyo guddiga doorashada Koonfur Galbeed in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103 ilaa amar danbe.
Haddaba, amarka hakintaani wuxu soconayaa ilaa inta guddigu ka xalinayo tabashooyinka ka soo yeeraya habraaca loo maray.
Muqdisho – Saaxiibada caalamku* waxay boorrinayaan in la dhammaystiro doorashada golaha shacabka oo loo dhan yahay, laguna kalsoonaan karo oo ay aqbali karaan dhammaan daneeyayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed sida ku cad jadwal la shaaciyey, 24 ka Diseembar 2021 iyo in kadib doorashada madaxweynaha lagu soo gabagabeeyo si degdeg ah.
Waxaan ku baaqaynaa in daah-furnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geeddi-socodyada la xiriira, oo ay ku jiraan magacaabista guddiga soo xulista, xulasta ergada, diiwaangelinta musharraxiinta, kuraas u xirirsta haweenka musharraxiinta ah, si loogu hoggaansamo qoondada boqolkiiba 30 ee lagu heshiiyey, iyo maareynta lacagaha musharraxiinta. Waxa aanu sidoo kale ugu baaqaynaa guddiyada doorashada inay fududeeyaan korjoogeynta dhammaan hawlaha goobaha cod bixinta.
Waxaan ku baaqaynaa in la tix geliyo xaqa ay musharixiinta u leeyihiin in ay isu soo taagaan doorashada iyadoo la marayo jawi ku dhisan tartan dhab ah oo xalaal ah.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa ergooyinka iyo musharrixiinta doonaya inay soo gudbiyaan cabashooyinka doorashada inay sidaas ku sameeyaan iyagoo u maraya hababka sharciga ah ee loo sameeyay ujeedkan.
*Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Belgium, Canada, Denmark, Itoobiya, Midowga Yurub (EU), Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur-Goboleedka (IGAD), Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Ururka Jaamacadda Carabta (LAS), Holand, Norway, Poland, Qadar, Ruushka, Suudaan, Iswiidhan, Iswisarland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Maraykanka, iyo Qaramada Midoobay.
Wararka12 hours ago
Wararka13 hours ago
Wararka7 days ago
Barnaamijyada7 days ago